Ogaden News Agency (ONA) – Ciidanka Cadawga Oo Gobolka Qoraxay Kagaystay Tacadiyo Kala duwan
Ciidanka Cadawga Oo Gobolka Qoraxay Kagaystay Tacadiyo Kala duwan
Posted by Dulmane	/ June 20, 2016
Wararka naga soo Gobolka Qoraxay ee wadanka Ogadenia ayaa sheegaya tacadiyo kala duwan oo ciidanka wayaanahu ugaysteen dadka shacabka ah ee ku dhaqan guud ahaan Gobolka Qoraxay.
Sida warku sheegayo ciidanka gumaysiga Ethiopia ee kusugan Gobolka Qoraxay ayaa bilaabay todobaadkan waday qaqabasho xoogan oo ay kula kacayeen dadka shacabka gaar ahaan dadka ay qaraabadoodu qurbaha jiraan.
Arintan ayaa ka dambaysay kadib markii horjooge cabdi Ilay uu waji gabax kala kulmay wadanka Austaralia oo uu doonayay in uu shir kuqabto taasoo looga dacareeyay.
Xogtan ayaa sheegaysa on ilaa hada xabsiga la dhigay dad shacab ah oo aad ubadan oo intooda badan lagu soo xidhay magaalada Qabridahare waxaana ku dadaali doonaa in aan idiin soo gudbino magacyada dadka shacabka ah ee xaq darada lagu haysto.
Sidoo kale waxaa dad shacab ah lagu Xidh Xidhay dagmada Shaygoosh iyo deegaanka Iskudhoonlay oo Gobolka Qoraxay kawada tirsan waxaana u dhaceen sidan.
15/6/16 Dagmada Shaygoosh waxay ciidanka wayaanahu xidhay iyo mooraduug ugu gaysteen Cabdi Dariiq oo ay dadkiisii oo dhan xidhay 80 geel ah na kala wareegeen. Deegaanka Iskudhoonlay waxay ciidanka cadawgu xidhay baahsan ugu gaysteen reer xasan baaquli oo kala ah
1 xassan baaquli ow faarax
2 axmadnuur xassan baaquli
3 indhacase xassan baaquli
4 maxamad siraad cabdi
5 cabdi maxamad oo aabo cadaani lagu naanayso waxaana laga dhacay reerkan 200 oo geel ah iyo 600 oo adhi ah.